'नेपाल सम्भावनाको देश हो, बुद्धि लगाएर काम गरे यहाँ अवसरै अवसर छन्'
नेपालको प्रतिष्ठित व्यावसायिक घराना गोल्छा अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष हुन् शेखर गोल्छा । सानो उमेरमै व्यवसायमा सफलता हासिल पारेका गोल्छा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै नयाँ कार्यसमितिको अध्यक्ष बन्ने उद्योग वाणिज्य महासंघको विधानको व्यवस्था अनुसार शेखर आगामी कार्यकालका अध्यक्ष हुन्, जुन पक्कापक्की भइसकेको छ ।
नेपालका उद्योगी व्यवसायीको छाता संगठनको रुपमा रहेको उद्योग वाणिज्य महासंघको भावी अध्यक्षको रुपमा योजना र कार्यक्रम के छन् ? औद्योगिक लगानीको अहिलेको वातावरण कस्तो छ ? यी लगायत समसामयिक विषयमा लोकान्तरले महासंघका भावी अध्यक्ष एवं वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छासँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ कुराकानीको सम्पादित अंश :
उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको रुपमा अवसर र चुनौती
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मेरो लागि एउटा मन्दिर जस्तै हो । किनभने आजभन्दा ५५ वर्ष पहिले नेपालका उद्योगी र व्यवसायी मिलेर यो संस्थाको कल्पना गरेका थिए, त्यसमध्ये एकजना मेरो बुवा पनि हुनुहुन्थ्यो । पहिलो विधान बनाउने कुरामा पनि उहाँ लाग्नुभएको थियो, उहाँको हस्ताक्षर नै छ । त्यसपछि मेरो काका र दाइहरू मिलेर लाग्नुभयो ।
मलाई लाग्दैन आजसम्म यस्तो कार्यसमिति बनेको छ जसमा हाम्रो परिवारको सदस्य छैन । निजी क्षेत्रको यत्रो विश्वास आर्जन गरेको संस्था जसमा मेरो परिवारको समेत योगदान छ यो धरोहरलाई कसरी अझ बढी सशक्त बनाउने भन्ने लक्ष्य लिएर आज म यहाँ आएको हो ।
मुख्य तीनवटा कुरा छ । सिद्धान्तको कुरा गर्दा निजी क्षेत्रको शीतल छहारी उद्योग वाणिज्य महासंघ कसरी हुनसक्छ ? निजी क्षेत्रमा रहेको हरेक समस्यालाई महासंघले एड्रेस गर्न सक्नुपर्‍यो । पहिलो भाग अहिले रहेका विद्यमान समस्या, कसरी लगानीको वातावरण सुधार्र्ने ? अहिले रहेका उद्योगका समस्याको समाधान गर्ने विषय छ । म आफैं उद्योगी भएकाले कहाँ छन् समस्या भन्ने विषयलाई पहिचान गरेर सुधारको पहल गर्छु ।
दोस्रो कुरा संगठन विकास हो । अहिले पनि हाम्रो सचिवालय र हाम्रो काम गराइमा केही सुधारको खाँचो छ । म सुधार गर्छु । हजारौं व्यक्तिलाई रोजगारी दिएर बसेको मान्छे भएकाले कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने मलाई थाहा छ । तेस्रो विषय हो – अवसर सिर्जना गर्ने । नयाँ अवसरलाई रिसर्च गरेर कसले कहाँ लगानी गर्ने भन्ने कुराको व्याकबोण्ड बनाउन चाहन्छु महासंघलाई । स्वदेशी, विदेशी लगानीको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने छ । त्यो काममा फोकस हुन्छु । छोटकरीमा भन्नुपर्दा मेरा लक्ष्य यिनै हुन् ।
देशको अर्थतन्त्रको अवस्थाको विश्लेषण
नेपालको अर्थतन्त्रमा केही अल्पकालीन चुनौती छन् तर दीर्घकालीन रुपमा हेर्दा हाम्रो अर्थतन्त्रका सूचकहरू एकदमै स्वस्थ छन् । त्यसले के देखाउँछ भने अल्पकालीन चुनौतीलाई पार गर्न सक्यांै भने दीर्घकालका लागि सब्स्ट्यान्स छ हाम्रो अर्थतन्त्रमा । हामी यी चुनौती पार गरेर अगाडि जान सक्छौं जस्तो लाग्छ ।
के प्यारामिटर राम्रो छ भनेर सोध्नुहुन्छ भने सोधानान्तरको स्थिति सुधार भइरहेको छ । ब्यालेन्स अफ पेमेन्टमा समस्या छैन । अरु विकासोन्मुख देशमा सबभन्दा ठूलो चुनौती सोधानान्तर घाटा नै रहेको हुन्छ । हामीकहाँ रेमिट्यान्स आइरहेको छ, केही घटेको जस्तो छ गत महिना तर ओभरल बढेकै छ । रेमिट्यान्सले गर्दा सोधानान्तरमा समस्या छैन यो हाम्रो अर्थतन्त्रको शुभ संकेत हो ।
आईएलओको रिपोर्टले पनि नेपालको उत्पादकत्व एकदमै कम रहेको देखाएको छ । नेपालीहरू बाहिर गएर एकदम मेहनत साथ काम गर्छौं, देशमा चाहिँ गर्न चाहँदैनौं । किनभने देशमा काम गर्ने वातावरण पनि छैन ।
हाम्रो आयातमुखी अर्थतन्त्र छ । भारतमा हेभिली डिपेन्डेन्ड छ । भारतको अर्थतन्त्र स्थिर नै छ । मूल्यवृद्धि ५/६ प्रतिशत हाराहारी छ । त्यही अनुसारले हामी पनि यहाँ ५/६ प्रतिशतको हाराहारीमा छौं । भारतसँगको परनिर्भरता अर्को पाटो छ तर इन्फ्लेसन हाम्रोमा कन्ट्रोलमा रहेको छ ।
रोजगारी र कामदारको कुरा गर्दा देशमा काम गर्ने मान्छे पाइरहेका छैनौं । बाहिरबाट मान्छेहरू आइरहेका छन् । नेपालमा काम गर्नको लागि हामी नेपालीहरू पलायन भएर बाहिर काम गर्न गइरहेका छांैं । आफ्नो भविष्य अन्य ठाउँमा हेरिरहेका छौं । यसका दूरगामी असर होलान्, यसको सामाजिक असर पनि होला तर एउटा तथ्य के हो भने देशमा बेरोजगारी कम छ । त्यो पनि शुभ संकेत हो ।
हाम्रो ग्रोथ रेट अहिले पनि हामी वान अफ दि ग्रोथ इकोनमी भइरहेका छौं । हाम्रो ग्रोथ इन्कुलुसिभ पनि छ । काठमाडौं मात्र होइन, देशका विभिन्न ठाउँमा विकासका लक्षणहरू देखिएका छन् । खासगरी प्राइभेट सेक्टरले गरेको काम । यो समावेशी ग्रोथले गर्दा स्थिरता उत्पन्न हुन्छ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ ।
अल्पकालीन रुपमा केही गम्भीर समस्या देखापरेका छन् । यसको मुख्य जरो तरलताको कमी रहेर सबै समस्या उब्जाएको हो । जब–जब पैसाको डिमान्ड हाइ हुन थाल्छ तरतला हाइ हुन जान्छ । हामीकहाँ पनि तरलताको समस्या बढेको छ । यो तरलताको समस्याले गर्दा मार्केट सुस्ताएको छ । सिमेन्ट र स्टिल जस्ता उद्योग डिग्रोथमा आएको छ । त्यसै गरेर इलेक्ट्रोनिक सामानको खपत नहुँदा राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनौं । यी सबै अल्पकालीन समस्या हुन् ।
अल्पकालीन समस्या समाधानका लागि उपाय लगायौं भने दीर्घकालीन रुपमा नेपालको अर्थतन्त्रको आधारभूत धरातल अझ पनि बलियो छ भन्ने मेरो बुझाइ छ ।
औद्योगिक र लगानीको वातावरण
औद्योगिक वातावरणको कुरा गर्दा नेपालमा विभिन्न कालखण्डमा विभिन्न चुनौती आएका थिए । कुनै बेला सायद नेपालमा सानो बजार थियो । ठूलो बजार आउन सक्दैनथ्यो । सरकार र निजी क्षेत्रको पनि लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि कम थियो । ऊर्जाको ठूलो समस्या भोगेकै हौ । १८ घण्टासम्म पनि लोडसेडिङमा गर्‍यौं । जेनेरेटरबाट उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्दा त्यसको कम्पिटेटिभ एडभान्स पनि सिद्धियो । श्रम सम्बन्ध एउटा ठूलो समस्याको रुपमा आयो । हरेक फ्याक्ट्रीमा बन्द हड्तालले ठूलो समस्या निम्त्याएको थियो । त्यसबेला धेरै उद्योग बन्द पनि भए । बन्द हड्तालको सिलसिलाले धेरै उद्योगलाई धरासायी बनायो ।
अहिले उद्योग क्षेत्रमा मैले देखेको मुख्य ५ वटा चुनौती छन् । एउटा तरलताको समस्याले गर्दा साना र मझौला उद्योगलाई ऋण पाउन एकदमै ठूलो समस्या भइरहेको छ । अर्को चुनौती जग्गा प्राप्ति । हामीले जग्गा पाउन छाडेका छौं । जग्गा निकै महंगो भएर गएको छ । जग्गा यति महंगो भएको छ कि उद्योगमा गर्नुपर्ने लगानी जग्गामा गरेर प्रतिफल आउन निकै गाह्रो भएको छ । तेस्रो हाम्रो कस्ट अफ डुइङ्ग बिजनेस एकदमै हाइ भएको छ, हामी एकदमै हाइकस्ट इकोनमी बनेका छौं । उदाहरणको लागि हाम्रो पूर्वाधार एकदम कमजोर छ । त्यसले गर्दा ढुवानीको कस्ट एकदमै बढी भएको छ । भारत लगायत तेस्रो देशबाट कच्चा पदार्थ ल्याउँदा ढुवानी धेरै ठूलो कस्ट बनेर आउँछ । यो ठूलो चुनौती रहेको छ ।
उद्योगमा लगानी गर्‍यौं, यो पैसा कहाँबाट ल्याइस् भनेर सोध्यो भने जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ ।
अर्को चुनौती बैंकको व्याजदर हो । आज बिहान मैले चेक गरेको थिएँ चाइनामा उद्योगीले व्याजदर ४ देखि ५ प्रतिशतमा पाउँछ । हामीकहाँ अहिले पनि १२ प्रतिशतभन्दा माथि छ । साना उद्योगलाई त झन् चुनौतीपूर्ण रहेको छ । भारतमा पनि उद्योगले पाउने ऋणको व्याजदर ८ देखि १० प्रतिशत रहेको छ । अर्को भनेको उत्पादकत्व हो । आईएलओको रिपोर्टले पनि नेपालको उत्पादकत्व एकदमै कम रहेको देखाएको छ । नेपालीहरू बाहिर गएर एकदम मेहनत साथ काम गर्छौं, देशमा चाहिँ गर्न चाहँदैनौं । किनभने देशमा काम गर्ने वातावरण पनि छैन । कानून पनि छैन र मोटिभेसन पनि छैन । बाहिर गएर सबभन्दा मेहनत गर्ने हामी नेपाली नै हौं । नेपालमा काम गर्न चाहँदैनौं । त्यसले गर्दा प्रोडक्टिभिटी एकदमै लो रहेको छ ।
उद्योगका लागि अझ पनि ऐन कानूनहरू अहिले पनि उद्योगमैत्री छैनन् । त्यस्तो कानून परिवर्तन गर्न पनि आवश्यकता छ । उदाहरणको लागि नयाँ औद्योगिक व्यवसाय ऐन त आएको छ । ऐन कानून लगानीमैत्री छैन । आएका नयाँ ऐनको सफल कार्यान्वयन देखिएको छैन । देवानी मुद्दा देवानीमा सीमित रहनुपर्छ । देवानी मुद्दालाई फौजदारी बनाउँदा निजी क्षेत्र एकदमै हतोत्साहित छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको टुलले लगानीकर्ता त्रसित
सम्पत्ति शुद्धीकरण एफएटीएफको गाइडलाइन्समा सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा आएको छ । खासगरी आतंकवाद नियन्त्रण र लागू औषध कारोबारको पैसालाई निरुत्साहित गर्न र ट्रयाक गर्न यो आएको छ । एफएटीफएको गाइडलाइनले अहिले निजी लगानीलाई रोकेको छ, किनभने अहिलेसम्म सम्पत्ति घोषणा गर्ने व्यवस्था थिएन । कसको कति सम्पत्ति छ भनेर सरकाररसँग केही लेखाजोखा छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण एउटा यस्तो टुल बनेको छ, जसलाई पनि प्रश्न गर्न सकिने । हाम्रो भनाइ के भने कसैले उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्छ भने गर्न देउ भन्ने हो । किनभने त्यो देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न र राजस्व बढाउनको लागि हुन्छ र देशमा अझ भ्यालु एडिसन आउँछ भने त्यसका लागि केही न केही सहुलियत खासगरी उद्योगमा लगानी गर्दा केही सहुलियत हुनुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको यो टुलले गर्दा सबै जना त्रसित छन् । लिगल पैसा भएपनि भोलि कसैले प्रश्न गर्‍यो भने कसरी जवाफ दिने यसमा ? किनभने अहिलेसम्म त पहिला कहिलै घोषणा नै गरेको छैन ।
निजी क्षेत्रलाई अहिलेसम्म भनिएको छैन कि तपाईंको पूर्वज र बाउबाजेसँग तपाईंको सम्पत्तिको लेखाजोखा के हो भनेर मागिएकै छैन । उद्योगमा लगानी गर्‍यौं, यो पैसा कहाँबाट ल्याइस् भनेर सोध्यो भने जवाफ दिन गाह्रो हुन्छ । अभिलेखीकरण गरिएको छैन । मुख्य कुरा त्यसको अभिलेखीकरण हुनुपर्‍यो । जबसम्म अभिलेखीकरण हुँदैन, तबसम्म निजी क्षेत्रलाई पनि ढुक्क हुँदैन । अहिले लगानी गर्छौं, भोलि यो कहाँबाट ल्याइस् भन्यो भने ? एउटा यस्तो नियम जसले निजी क्षेत्रलाई उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नको लागि त्रास सिर्जना गरेको छ ।
वैदेशिक लगानी भित्र्याउन कति सहज ?
अहिलेको लगानीले हामी दोहोरो डिजिटको वृद्धिको कल्पना गर्छौं, त्यो सम्भव हुँदैन । त्यसैले हामीलाई विदेशी लगानी चाहिएको छ । विदेशी लगानी मात्र होइन, ऋण पनि लिन सक्नुपर्छ । हामीसँग भएको स्रोतसाधनले मात्र १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सम्भव छैन तर हामी विदेशी लगानीको नाममा विदेशीलाई काखा र स्वदेशीलाई पाखा गर्‍यौं भने त सम्भव छैन । यसले निरुत्साहित तुल्याएको छ । किनभने हामी विदेशीका लागि सबै ढोका खोलिदिन्छौं । एकद्वारबाट सबै क्लिरेन्स गर्दिन्छौं, स्वदेशीको काम गर्दैनांै भने स्वदेशी लगानीकर्ता निरुत्साहित हुन्छन् । स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।
विदेशी लगानी कुन क्षेत्रमा आउने हो ? हरेक क्षेत्र सबैका लागि खोल्दिँदा के उपलब्धि भयो त ? डब्लुटीओमा गएको १५ वर्ष भयो के उपलब्धि भयो त ? विदेशी लगानीको सन्दर्भमा पनि एउटा समझदारी आवश्यक छ जस्तो लाग्छ । जुन क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीकर्ताले गर्न सक्छन्, त्यो क्षेत्रमा विदेशी पूँजी ल्याएर ओपन छाडिदिने हो भने भोलि स्वदेशी लगानी स्वाहा हुन्छ ।
नेपालको निजी क्षेत्र साँच्चिकै कर तिर्न चाहन्छ । निजी क्षेत्र देश समृद्ध भएको देख्न चाहन्छ, विश्वास गर्नु पर्‍यो नि !
व्यापारघाटा कम गर्न के गर्ने ?
१२ भाग आयात गर्दा जम्मा १ भाग हामीले निर्यात गर्ने अवस्था बनिरहेको छ । व्यापारघाटा २ तरिकाले कम गर्न सकिन्छ । एउटा स्वदेशमा उत्पादन बढाएर र डिपेन्डेन्सी कम गरेर । अनि अर्को निर्यात गरेर । नेपालका उद्योगको उत्पादकत्व क्षमता बढाएर कस्ट घटाउन सक्यो भने देशमा उद्योग आउँछ । निर्यातको लागि पनि हामी फोकस्ड हुनुपर्छ । हामी हाइकस्ट इकोनोमीमा छौं । फोकस बढाउनुपर्छ । उदाहरणको लागि बंगलादेश अहिले विश्वको ठूलो गार्मेन्ट निर्यातकर्ता भएको छ । बंगलादेशमा जब ठूला राजनीतिक घटनाक्रम भए, एउटा कानून के बन्यो भने गार्मेन्ट इन्डस्ट्रिजमा बन्द हडताल गर्न नपाउने । हाम्रोमा द्वन्द्वकालमा सबै गार्मेन्ट उद्योग सखाप भए । कुनैपनि कमिटमेन्ट पूरा भएनन् । कुन–कुन उद्योगबाट नेपालले निर्यात बढाउन सक्छ, त्यस्तो उद्योगलाई सरकारले पहिचान गरेर त्यसमा रहेका चुनौतीलाई समाधान गरेर अगाडि बढाउन सक्यौं भने मात्र निर्यात सम्भव छ । देशमा पनि लगानीको वातावरण बनाउन धेरै सुधार गर्न जरुरी छ ।
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अभियानमा निजी क्षेत्र कहाँ ?
सरकारले अघि सारेको समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा निजी क्षेत्रले पनि देखेको सपना हो । हामी निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर यो सपना साकार पार्न चाहन्छौं । समृद्ध नेपालको सपना निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य नभइ सम्भव छैन ।
किनभने अहिले पनि हाम्रो अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान ६० देखि ७० प्रतिशत छ । निजी क्षेत्रले जबसम्म लगानी गर्दैन, जबसम्म रोजगारी सिर्जना गर्दैन, हामी समृद्धिको सपना देख्न सक्दैनौं । यो सपना त हामी सबैले देखेका हौं । हामी सबैले आफ्नो जीवन कालमा नेपाललाई समृद्ध देख्न चाहन्छौं । हामी आफ्नैमा सुखी हुन चाहन्छौं ।
अभियान सफल बनाउन सरकारले निजी क्षेत्रलाई जुन विश्वासको वातावरण बनाउन सक्नुपर्थ्यो, त्यसमा कमी भएको देखेको छु । म उदाहरण दिन चाहन्छु जुन–जुन देशमा निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरिएको छ, त्यो देशमा उन्नति र समृद्धि चाँडो आएको छ । जस्तो चाइनाको कुरा गरौं । चाइना कम्युनिस्ट देश भएपनि त्यहाँ समृद्धि आएको छ भने निजी क्षेत्रको लगानी र निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरेर आएको छ । युरोपियन मुलुक, अमेरिका र भारतमा पनि निजी क्षेत्रलाई विश्वास गरिएको छ ।
हाम्रोमा विश्वासको कमी देखिएको छ । निजी क्षेत्र पन्चिङ ब्याक बनेका छौं । अनुगमनको नाममा निजी क्षेत्रलाई पेलेर आफ्नो नेतृत्व देखाउँछौं । हामी निजी क्षेत्रलाई अनुमगन गर्दा अनुसन्धानको तार्किक निष्कर्षमा पुग्नुअघि नै उनीहरुलाई एक्सपोज गरिदिन्छौं । दम्भ देखाउँछौं । यो सबैले गर्दा निजी क्षेत्रको मनोबल घटेको छ । त्यो कुरा निजी क्षेत्रलाई स्वीकार्य छैन । जीडीपीदेखि करको रेसियो छ । पूरै साउथ एसियामा नेपालको हाइ छ । त्यसले के देखाउँछ भने नेपालको निजी क्षेत्र साँच्चिकै कर तिर्न चाहन्छ । निजी क्षेत्र देश समृद्ध भएको देख्न चाहन्छ, विश्वास गर्नु पर्‍यो नि !
५ प्रतिशतले बदमासी गर्छन् होला तर ५ प्रतिशतले गर्दा ९५ प्रतिशतलाई बदनाम गर्न त मिल्दैन । समग्रमा नेपालको निजी क्षेत्र कर तिर्न चाहन्छ । त्यसको प्रमाण त हामीले दिइसकेका छौं । यस्तो निजी क्षेत्रलाई अविश्वासको वातावरण पैदा गरेर जुन हिसाबले पीडा दिइन्छ, मानमर्दन गरिन्छ, यो सबैले लगानीको वातावरण सुध्रिँदैन । यसमा ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।
नेपालीले काम नपाउने, उद्योगले कामदार नपाउने, तालमेल मिलेन ?
मलाई के लाग्छ भने ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली युवायुवती देशबाट पलायन भएका छन् । उनीहरूले देशबाहिर नै अवसर खोजेका छन् । उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले हामीहरूको अर्थतन्त्र चलायमान भएको छ । देश बाहिर काम गर्न जाने कामदारले बाहिर धेरै कमाएका होलान् । नेपालमा पनि कामदारको तलब बढेको छ, अटोमेटिक एउटा यस्तो विन्दु आउँछ, नेपालमा काम गर्दा पनि त्यो म्याच गर्ने पोइन्टमा आउँछ । यति गर्दापनि धेरै कुरा मनोवैज्ञानिक हुँदो रहेछ ।
एउटा मलेसिया जाने कामदारले ३० हजार कमाउँछ भने नेपालमा पनि त्यति कमाउन सक्छ । नेपालमा त्यति कमाइ भएपनि उ यहाँ नबस्नुको कारण उसले फर्किंदा बल्कमा पैसा ल्याउँछ, जसले उ घरपरिवार र समाजमा हिरो हुन्छ । यही बसेर ३० हजार कमाउँदा उसको बचत हुँदैन । बाहिर जाँदा सेभिङ गर्ने प्रचलनले गर्दा समाजमा विदेश जाने मोह देखिएको हो ।
बिस्तारै देशमा नयाँ रोजगारीको सिर्जना गरिसकेपछि सायद यस्तो विन्दु आउँछ, नेपालीले विदेश होइन, आफ्नै देशमा श्रम गर्छन् । त्यो विन्दु त्यति सजिलै त आउँदैन, ओभरनाइट हुने पनि होइन ।
युवामा निराशा देखिएको बेला आशा जगाउन के गर्ने ?
मलाई के विश्वास छ भने नेपाल सम्भावनाको देश हो, ल्यान्ड अफ अपरचुनिटीको देश हो । त्यसका ५ वटा कारण छन् ।
पहिलो कारण हामी युथफुल कन्ट्री हौं । हाम्रो औसत एज २३ वर्ष रहेको छ । विश्वको सबभन्दा योङ कन्ट्री रहेका छौं । झण्डै ३ करोड जनसंख्या, त्यसको एभ्रेज एज २३ वर्ष । यो कम्बिनेसन विरलै पाइन्छ । जहाँ युथ हुन्छ, त्यहाँ नयाँ काम गर्न सकिन्छ । जहाँ युथ हुन्छ, त्यहाँ इनर्जी हुन्छ । त्यो नेपालमा छ जस्तो लाग्छ ।
दोस्रो कुरा, नेपालको अहिलेको प्रतिव्यक्ति आय झण्डै १ हजार ५० जस्तो पुग्न थालिसकेको छ । १ हजार ५० पनि समावेशी छ । त्यसले गर्दा नेपालमा जुन ग्रोथ रेट छ, नेपालमा त्यो स्टेबल तरिकाले अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई विश्वास छ । यो एउटा ठूलो अवसर पनि हो । किनभने १ हजार डलर पुगेपछि मानिसले अरु–अरु चिजमा खर्च गर्न थाल्छ । जस्तै राम्रो लुगामा, राम्रो खानामा, घर बनाउनमा, गाडीमा, अरु लक्जरी सामानमा खर्च गर्न थाल्छ । बेसिक नीड हजार डलरले पुर्‍याउँछ, यसबाट क्रमशः गर्दा बजारमा ठूला सम्भावना बढ्छन्, डिमान्ड धेरै बढ्न सक्छ ।
अहिले काठमाडौंमा रेस्टुरेन्ट हेर्नुस् त ! पहिला कति थिए, जतिबेला ४ सय डलर हुँदा । जताततै रेस्टुरेन्ट खुलेका छन् । पूरै फुल छन् । काठमाडौंमा होइन, बाहिर शहरमा जानुस् । दुर्गमका जिल्लामा पनि रेस्टुरेन्ट खुलेका छन्, त्यहाँ चलेका छन् ।
तेस्रो अबसरको कुरा गर्दा पर्यटन हो । पर्यटनको कुरा गर्दा गत वर्ष १० लाख आएका थिए, अहिले २० लाख ल्याउने लक्ष्य राखेका छौं । भियतनाममा के छ र ? त्यहाँ वार्षिक करोडभन्दा बढी पर्यटक आउँछन् । हाम्रोमा पहाड छ, हिमाल छ, वाइल्ड लाइफ छ, कल्चर छ । हामी १० लाख ल्याउँछौं । हामीले १० लाखलाई २० लाख र २० लाखलाई ५० लाख पुर्‍याउन सके अझ १० देखि २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौं । विश्वले हामीलाई मर्नुभन्दा अगाडि जानुपर्ने देश भनेर चिन्छ । त्यो एडभान्टेज त लिउ न । यो सम्भावना देखेको छु ।
अर्को धेरैजसो सामान इम्पोर्ट गर्र्छाैं । त्यसलाई स्वदेशमै उत्पादन गर्न सक्छौं । बजार छ । बायोडाइभर्सिटी छ, मैले धेरै अपरचुनिटी देखेको छु । भारत र चीनको प्रोक्सिमिटीको सिजर्नी त नेपालमा आउँछ होला नि ! हाम्रो छिमेकी धनी हुँदा फाइदा लिन सक्छौं नि ! चीनबाट अब सबभन्दा धेरै पर्यटक आउन थालेका छन्, त्यो अपर्चुनिटीलाई क्याच गर्न सकिन्छ । गाउँमा होमस्टे बनेका छन् । यो एउटा युनिक एक्सीपेरेन्स हो । यो देशमा अवसर छ, बुद्धि लगाएर काम गर्न सकेमा आफैं स्वरोजगार भएर धेरै काम गर्न सक्छौं जस्तो लाग्छ ।